10 Ama ama ama ama ama ama | Save A Train
Home > Travel Europe > 10 Ama ama ama ama ama ama
Nnukwu na ije, ọgaranya akụkọ ihe mere eme, na obodo kacha mma n'ụwa, na 10 ama ama ama kachasị ama ama maka ụgbọ okporo ígwè kwesịrị ịdị na ya ịwụ ndepụta. Site na Europe ruo China, site n'ọnụ ụzọ ama ama nke Berlin, na obodo a machibidoro iwu, ebe a bụ zoro ezoro peek na akara ngosi nke ga-ahapụ gị juru.
1. Ifflọ Eiffel Paris
O siri ike ịhapụ ileba ama a, 300 mita elu ígwè ụlọ elu. Ma ị na-agagharị na Le Marais, Nwanyị anyị, ma ọ bụ Latin Quarter, a oke akara ngosi nke Paris ga-abụ na anya mgbe niile.
Ya mere, ọ bụrụ na ị na-eme njem na Paris na nke mbụ, ị ga-aga ileta Eiffel Tower n'ehihie na n'abalị maka elele Eiffel niile. Ya mere, ị kwesịrị ịdị njikere nke ọma maka ọbịbịa gị ma mara na ụzọ kachasị mma iji gaa Eiffel Tower na Paris, ma ọ bụ ebe ọ bụla na Europe.
Uzo esi aga na Eiffel Tower Site Rail?
The kacha mma iji gaa Eiffel Tower bụ ụgbọ okporo ígwè. The njem ọha na eze Sistemụ na Paris dị ezigbo mma ma dịkwa mma. Ga njem gafee arrondissements na akara ala dị mfe, na ebe etiti Eiffel Tower dị na obodo ahụ pụtara na ọ jikọtara ya na ụgbọ okporo ígwè French.
Champ de Mars / Tour Eiffel bụ ọdụ ụgbọ oloko kacha nso, na Eiffel Tower bụ naanị 2 Nkeji oge site na ọdụ ụgbọ. Otú ọ dị, ịpụ na ọdụ Trocadero ga-enyekwu echiche anwansi nke ụlọ elu na Seine. Nwere ike iji RER Line C gaa Eiffel Tower na nkeji ole na ole ọ bụla, na metro tiketi maka otu njem bụ € 1.9.
2. Kacha mara amara Landmarks ileta Site Rail: Nnukwu mgbidi nke China
Greatestwa kachasị ama mmadụ mere n’ụwa, Nnukwu mgbidi nke China weghaara 2000 afọ iji wuo. Mgbidi mgbidi mbụ bidoro na mbido narị afọ nke asaa, ma emesia agbakwunyere mgbidi ndi ozo iji mee ka ha sie ike ma gbanwee Nnukwu Mgbidi nke China n'ime otu n'ime akara ama ama di egwu na uwa.
Ebe ọ bụ na nnukwu mgbidi nke China buru oke ibu, ị nwere ike ịmasị ya site n'aka ọtụtụ ebe gafee China, ma nwee ike buru 175 ụbọchị iji gafee ya nke ọma. Otú ọ dị, ebe kachasị mma iji nwee mmasị na Great Wall of China bụ Beijing, ala ịta ahịhịa nke Beijing, na obodo ndị dị ka Badaling. ikwubi, Nnukwu mgbidi nke China, akụkọ ihe mere eme pụtara, na imepụta ụwa a na-eme ya otu n'ime 10 ama ama kachasị ama ama maka ụgbọ okporo ígwè.
Uzo esi aga nnukwu mgbidi China site na Beijing?
Kwesịrị ịga njem Huoying site na ụzọ ụgbọ oloko ma ọ bụ were ọdụ ụgbọ elu Express. Mgbe ahụ si Huangtudian Railway Station were ụgbọ oloko S2 gaa Badaling Railway Station. Ga-ahụ ọnụ ụzọ nke Akwa Mgbidi na njem ije 20 site na ọdụ ụgbọ oloko.
3. Kacha mara amara Landmarks ileta Site Rail: Slọ ụka Sistine Vatican City
Michelangelo mara mma frescos abụwo ndị ọbịa dị ịtụnanya kemgbe afọ. Slọ Sistine dị na Vatican City ọ kacha mma ileta na mgbede Fraịdee na abalị n’oge ọkọchị mgbe ndị mmadụ na-ejupụtaghị. Ndị kasị ukwuu artwork na ụwa bụ inweta site na Vatican ngosi ihe mgbe ochie, na ịkwesighi ịdekọ oge iji tinye ya.
Akpọrọ Sistine Chapel aha Pope nke isii, onye wuru ya na 15th century. N'ihi ya, Frescoes nke chọrọ mma n’elu ụlọ dị na Sistine Chapel na-egosi akụkọ ndị sitere n’akwụkwọ Jenesis. Na agba agba dị egwu na agba, a na-echekwa frescoes nke ọma, ma ị nwere ike iji ụbọchị zuru oke were ụbọchị niile na-ele ihe nkiri anya.
Uzo esi aga na Sistine uka site na Rome?
Sistine Chaple dị na Vatican City, ná mpụga Rom. Ya mere, ọ bụrụ na ị na-eleta Milan, Florence ma ọ bụ ebe ọzọ na Europe, ị kwesịrị ị na mbụ were a elu-ọsọ ụgbọ okporo ka Rome. mgbe, were ụgbọ oloko si Roma Tiburtina ruo Roma St.. Ọdụ Pietro, na na ọ bụ 14 Nkeji oge na-aga Sistine banye n'Chalọ Ekpere.
Site na Budapest ma ọ bụ Vienna, Ọ dịtụbeghị mfe njem gaa Charles Bridge site n'akụkụ ọ bụla na Europe. Nke ahụ abụghị ihe ijuanya, na-atụle eziokwu ahụ bụ na Charles Bridge dị na Prague bụ otu n’ime akara ama ama ama ama ileta nke ụgbọ oloko. The gothic nkume akwa, awụ, ọnọdụ etiti n'etiti Mala Strana na obodo ochie, bụ nanị ole na ole n’ime ihe ndị kpatara otuto ya.
Ọzọkwa, Charles Bridge bụ otu n'ime akwa kachasị mma na okenye na Europe. Ya mere, ị ga-ezute ọtụtụ narị ndị njem nleta na-achọ ihe kacha mma Foto pic ntụpọ na Bridge. Ee, n'oge ọ bụla n'ụbọchị na n'afọ, ga-esonye ọtụtụ ndị ọbịa na Prague iji nwee mmasị n'otu n'ime ebe ndị ama ama n'ụwa.
Uzo esi aga na Charles Bridge Site Rail?
Train njem na Europe bụ nnọọ ala na ngwa ngwa, yabụ ị nwere ike ịga Charles Bridge site na nke ọ bụla n'ime mba ndị agbata obi. Si isi ụgbọ okporo ígwè (N’asụsụ obodo: Central ọdụ), ọ bụ maka 13 Nkeji oge site na metro gaa Charles Bridge. I nwekwara ike iji ụkwụ gaa ebe ahụ, ọ bụ a 25 nkeji gaa Charles Bridge site n'ọdụ ụgbọ oloko, mana obere akwadoro ma ọ bụrụ na ị na-esị na Dresden, Budapest, ma ọ bụ Zermatt.
5. Kacha mara amara Landmarks ileta Site Rail: St. Katidral Basil Moscow
Otu n'ime ihe kachasị akụkụ dị egwu n'ụwa, Red Square dị na Moscow bụ ụlọ katidral na-adọrọ adọrọ. St. Katidral Basil dị ebube, na 6 ụlọ ekpere, eji ihe osise mara mma na ihe osise. Ebube katidral mara mma na facade na ime ụlọ, ejiri temple na eserese chọọ ụlọ ụka ọ bụla mma.
St. Katidral Basil bụ otu n'ime akara ngosi kacha elu Moscow ma wuru ya dị ka akara mmeri maka mmeri nke Ivan jọgburu onwe ya, ndị Khan nke Kazan. N'ihi ya, ebe 1561 ọ na-adọta ọtụtụ nde ndị njem kwa afọ maka ele 1 nke akara ngosi kachasị mma na Russia.
Uzo esi aga na St.. Katidral Basil?
Saint Basil Katidral dị na Red Square bụ, ma ị nwere ike were ụzọ ụgbọ oloko site na ọdụ Leningradsky gaa Okhotny Ryad. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ nke kacha mma Russia, mgbe ahụ ụgbọ oloko dị elu si St.. Petersburg bụ ezigbo ụzọ iji gaa.
6. Peterhof Obí Na St.. Petersburg
Peter Versa wuru Russian Versailles dika ala nna ya. Na nke gị njem gaa Peterhof Obí, ị ga-eleta Lower Park, Ogige Ugwu, Osimiri, na obere obí eze abụọ – Monplaisir na Marli Obí. Peter the Great bịara ileta Versailles na afọ 1770 wee chọpụta ezigbo ọrụ French n'ime otu ama ama ama ama na Russia taa.
Obí eze nke Tsar kacha ama ama n’isi iyi, Nnukwu osimiri, ihe oyiyi nke Akwụkwọ Nsọ, na ubi. Ndị German bibiri ọmarịcha obí a na WWII mana ọfụma rụzigharịrị ya ka ọ bụrụ UNESCO ụwa nketa saịtị.
Uzo esi aga na Peterhof?
Peterhof obí bụ otu n'ime n'elu akara ngosi gaa leta St. Petersburg. Nwere ike ịga njem na Peterhof site na ụgbọ oloko site na ọdụ Baltiskiy ruo Noviy Peterhof Station.
7. Kacha mara amara Landmarks ileta Site Rail: Ihe omuma Rome
Colosseum bụ otu n’ime ihe ịtụnanya asaa dị n’ụwa ugbu a, Ya mere, ọ kacha mma ileta Colosseum na a eduzi njegharị. Ma ọ bụghị ya, na dum akụkọ ihe mere eme nke nnukwu ihe owuwu a ga-efu gị. Ndị eze ukwu Flavian rụrụ ọmarịcha ọrụ a dị ka ebe a na-eme egwuregwu, n'echiche ichebe ìgwè mmadụ ahụ pụọ na mmiri ozuzo na ifufe, n'uche.
Taa ị nwere ike ịga leta ọkwa niile nke Colosseum, ma ọ bụ nwee mmasị na ya site n'ọtụtụ ụlọ nri na kọfị dị nso. Na mgbakwunye, nnukwu colosseum a wuru, eji taa dika egwu egwu ebe mgbakọ. Ebe a, ị ga-ahụ nnukwu aha na ụwa egwu, dị ka Elton John.
Uzo esi aga na Colosseum?
Nwere ike iru Colosseum si ma ọdụ ụgbọ elu na Rome, ụgbọ okporo ígwè. O nwere ụgbọ oloko na-ahapụ nke ọ bụla 15 nkeji gaa ọdụ Tiburtina, wee jiri metro gaa na akara ngosi Italiantali a. O doro anya, ọ dị mfe iji Colosseum si mbụk center na Rome.
8. Kacha mara amara Landmarks ileta Site Rail: Westminster Obí Na London
Ihe ama ama ama na England bu Westminster Obí na Big Ben Tower. Useslọ ndị omeiwu. Victoria Tower na ndị kasị ama ụlọ elu dị n’ụwa, Big Ben, dị kasị ama ịrịba ama na England.
Na-ele Osimiri Thames anya, na London Eye mma dị nso, ọnọdụ dị na Westminster Obí dị mma. Maka echiche panoramic dị ịtụnanya, gaa Lọndọn Anya n'afọ niile, n'ihi na ọnụ ụzọ Westminster ga-ekwe omume naanị na Satọde, n'oge July na August.
Uzo esi aga na Westminster Obí na Big Ben?
Were eriri okirikiri gaa ọdụ Westminster ma ọ bụ ọdụ Trafalgar. Ọ bụrụ n ’ị na-esi na mpaghara ndị dị na London abịa, ebe ọ bụla na UK ma ọ bụ Europe, mgbe ahụ South Western Railway ga-abụ ụzọ kachasị mma iji gaa.
9. Obodo a machibidoro iwu China
N'ime obi Beijing, ị ga-ahụ ọnụ ụzọ nke ụlọ eze kacha ukwuu n'ụwa. Ibu karịa Peterhof, ndị Louvre, Kremlin, na Vatican, na Machibidoro Iwu City Obere nwere 980 n'obí ụlọ inyocha. N'adịghị ka akara akara ndị ọzọ dị n'ụwa, onye a ka osisi nile mere. na 25 Ndị eze China na-ebi n’obí eze n’oge gara aga, na Machibidoro Iwu City bụ ndị kasị ibu ngosi nka na ụwa.
Ihe ngosi pụrụ iche a ma ama enwetawo aha ya n'oge ugbu a. Nke a bụ n'ihi n'eziokwu na 40% n'obí ka machibidoro ndị ọbịa. Otú ọ dị, ị ka nwere ike ịhụ ihe mgbagwoju anya site na ugwu dị na Jingshan Park. Obodo a machibidoro iwu nwere ike ọ gaghị abụ otu n'ime obí eze mara mma ma mara mma na Europe, ma ọ na-adọrọ mmasị.
Olee Otú M Ga-esi na Machibidoro Iwu City?
Shanghai na Beijing bụ ihe dị ka 5 awa ụgbọ okporo ígwè, ma na Beijing, ị nwere ike were metro gaa na Machibidoro Iwu City.
10. Kacha mara amara Landmarks ileta Site Rail: Ọnụ Gatezọ Brandmá Brandenburg
Ọnụ ụzọ Brandenburg bụ akara ama dị mkpa nke Berlin, dị ka ọ bụ akara nke ákwà mkpuchi Iron ma kewaa Berlin otu mgbe. Onye Prussia King Frederick William II wuru ụzọ mbata ahụ, na narị afọ nke 18. N'ihi ya, ụzọ kasị mma ịmụta banyere akụkọ ihe mere eme n'azụ akara ngosi a, na nkenke na mgbe ị na-ezute ndị njem ndị ọzọ, bu site na ije ije ije.
N'ehihie na ngwụsị izu, Pariser Platz ghọrọ ebe ọtụtụ ndị omenkà na ndị egwu na mpaghara. Nwekwara ike ịhụ ndị obodo na-agba ịnyịnya n'ọnụ ụzọ ámá ma na-anọdụ ala, akparị ụka, echere ụzarị anyanwụ iji lee site n'ọnụ ụzọ ámá.
Kedu ka m ga-esi banye n'ọnụ ụzọ ámá Brandenburg?
Mostzọ kachasị adaba iji gaa Brandenburg Gate bụ site na S-Bahn, usoro ụgbọ oloko. Were akara ọ bụla na-aga ebe ọdụ ụgbọ okporo ígwè Brandenburger.
Iji Mechie, ebe, akụkọ ihe mere eme pụtara, ije, na ịdị ukwuu nke ọtụtụ akara ngosi ndị a na-adọta ọtụtụ nde ndị njem nleta kwa afọ. Dị ka ị na-eguzo n'ihu ihe ịrịba ama ọ bụla, na Europe, Russia, ma ọ bụ China, ọ na-eju gị anya na ịma mma na okike nke saịtị ọ bụla.
ebe a na Save A Train, anyị ga-enwe obi ụtọ inyere gị aka ịhazi otu n'ime ndị a 10 ama ama kachasị ama na ụwa site na ụgbọ okporo ígwè.
Chọrọ Embed anyị blog post “10 Kasị Ama Landmarks ileta Site Rail” jidesie gị na saịtị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fig%2Fmost-famous-landmarks-visit-rail%2F - (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
Inside ị anyị njikọ maka English ọdịda ibe, ma anyị nwekwara https://www.saveatrain.com/ru_routes_sitemap.xml, na i nwere ike ịgbanwe / de na / fr ma ọ bụ / ya na ndị ọzọ na-asụ asụsụ.